IPirates ifuna ukulula inkontileka yomdlali ‘ofunwa’ elase-Egypt | News24
IPirates ifuna ukulula inkontileka yomdlali ‘ofunwa’ elase-Egypt
Cape Town – Izinkunzi zaseSoweto, i-Orlando Pirates, seziphakamise ukulula inkontileka yomdlali wazo ogijima esiswini, u-Issa Sarr, emizamweni yayo yokuphebeza imibiko yokuthi ufunwa yizinkunzi zase-Egypt, i-Al Ahly.
USarr, owajoyina amaBhakabhaka evela kuPlatinum Stars ngonyaka ka-2014, ubelokhu eyingxenye yesikwati sePirates esiswini, kodwa njengoba inkontileka yakhe isifinyelela ezinyangeni eziyisithupha zokugcina sekuvele imibiko yokuthi izinkuzi zase-Egypt zimconsela amathe lo mdlali.
OLUNYE UDABA: Wonke umuntu ufuna ukuqeqesha iPirates – ogaqele oweBucs
Kodwa-ke omele lo mdlali oneminyaka engu-30 ubudala, uDenis Idrissa, udalule ukuthi ikilayenti lakhe selivele lenzelwe isiphakamiso sokuthi lihlale kuleli qembu elidlala kuPremiership, nangale kwale sizini.
“IPirates ifuna ukulula inkontileka kaSarr kuze kube u-2019. Ngizokuxoxa nabo uma ngabe sengihambele eNingizimu Afrika,” u-Idrissa utshele iSoccer Laduma.
USarr useshaye amagoli angu-6 emidlalweni engu-79 kumaSea Robbers kusukela awajoyina eminyakeni emithathu eyedlule.